Archives tag: roidmi
Dom » Entries tagged with "roidmi"
hevitra, Smart Home, Fandraisana Xiaomi
Roidmi Eve Plus - tena eo amin'ny "+" ve izany?
famerenana, vacuum madio, roidmi, trano hendry
Raha ny marina dia sahirana tamin'ny fanoratana ity famerenana ity aho. Tsy noho ny nanoratako azy tamin'ny misasakalina, ary tokony hiarina hiasa amin'ny 24:00 aho (ny kafe amin'izao fotoana izao dia afaka miasa mahagaga!). Hafa ny olana ... Roidmi ...
Roidmi Eve Plus - mpanadio banga vaovao izay mety hanakorontana eny an-tsena
Xiaomi dia manana orinasa marobe ao amin'ny portfolio-ny. Taloha, samy nanao zavatra hafa ny tsirairay tamin'izy ireo, fa androany kosa dia manomboka mifangaro - miaraka amin'izay dia mampifady kely ny tenany. Roidmi, orinasa iray malaza indrindra amin'ny kojakoja fiara ...
Roidmi 3S, midika hoe ny fiara rehetra mety ho Smart! [Famerenana horonantsary]
20 Novambra 2020
roidmi, roidmi 3s, auto auto
Ahoana raha Smart daholo ny fiara? Raha mba nanana fitaovana mamela antsika hilalao mozika mora amin'ny telefaona isika raha tsy misy azy, na dia tsy manana Bluetooth aza ny fiara. Izany! Ity no Roidmi 3S
Roidmi dia mampiseho paompy vaovao misy bateria
2 Jolay 2020
Roidmi dia orinasa iray mifandray amin'i Xiaomi ary miara-miasa amin'ny kojakoja fiara. Namoaka paompy vaovao vao amidy, izay handoka ny baolina sy ny kodiarana amin'ny fiara. Tsy nanoratra momba an'i Roidmi izahay ...
andry, Fandraisana Xiaomi
Ny orinasa Xiaomi mifandraika amin'ny Smart Home - lisitra (fizarana 2)
70mai, Aqar, honeywell, huami, iHealth, ninebot, roidmi, xiaomi, fahazavana, yi
Omaly tao amin'ny SmartMe dia namoaka ny ampahany voalohany amin'ny lisitry ny orinasa Xiaomi rehetra izay miasa amin'ny faritra Smart Home izahay. Androany dia mamoaka ny ampahany faharoa isika, izay mampiseho ireo orinasa hafa mifandraika amin'ny fahazoana automatique an-trano ary maro hafa. Raha toa ka ...
Xiaomi dia mamoaka fanadiovana rivotra vaovao anaty fiara
Tamin'ny taona lasa, Roidmi, marika Xiaomi dia namoaka fanadiovana rivotra. Saingy, somary avo be ny vidiny ary avy any 500 ka 700 PLN. Ankehitriny i Roidmi dia namoaka ny taranany vaovao ary kivy mafy ...
Tutorials, Smart Auto
Roidmi 3S - mpitari-dalana mini momba ny fomba famonoana ny tsiroaroao anaty fiara
Maraina, fito maraina, fahanginana. Handeha hiasa ianao ary avadinao moramora ny fanalahidy. Ary efa fantatrao izay hitranga, satria omaly dia nihaino mozika mafy ianao mba hiambina hatrany. Ny Roidmi anao, faly daholo, voalohany ...
Ny fiara tranainy iray koa mety ho hendry! Izany no Roidmi 3S
Manana Corsa aho manomboka amin'ny 2010. Mety tsy ilay fiara tranainy indrindra eran'izao tontolo izao io, fa afaka manadino ireo kojakoja toy ny HUB, Apple CarPlay, Android Auto. Ary alao sary an-tsaina izao fa handeha ho any amin'ny faritra atsinanan'i Polonina ianao ary ...